Tilmaamaha Tafaariiqda ee SoLoMo | Martech Zone
Bulsho, Degmo, Moobil Naanaysta taas ayaa ah SoLoMo waana istaraatiijiyad sugaysa koritaan badan oo warshadaha ah. Bulshadu waxay ku socodsiisaa taraafikada iyada oo loo marayo dhiirrigelinta iyo wadaagista, tallaabada wadayaasha maxalliga ah inta isticmaaleyaashu ay raadinayaan tafaariiqda gobolkooda, moobiilkuna wuxuu wadaa go'aanka iibka gudaha iyo dibedda goobta tafaariiqda.
In kasta oo heerarka tafaariiqda tafaariiqdu u hooseeyaan kuwa isticmaala taleefannada casriga ah, tirakoobyadani ma sheegaan sheekada oo dhan, maaddaama aaladaha moobiilku ay si aad ah u saameynayaan go'aamada iibsiga ee dukaanka iyo khadka tooska ah. Laga soo bilaabo Monetate's Infographic: Tilmaamaha Tafaariiqleyda ee SoLoMo
Infograafigani wuxuu siiyaa tirakoobyada taageeraya tafaariiqleyda in maalgashi lagu sameeyo moobillada, barnaamijyada moobiilka, adeegyada goobta, raadinta maxalliga ah iyo isdhexgalka bulshada ay tahay fursad weyn oo lagu kaxeeyo doolar badan albaabkooda.
Tags: afar geesoodinfographicmaxaliga ahadeegyada goobtaSuuqgeynta Mobilada iyo Mashiinkadukaanobulshada deegaankaMedia Social Suuqkali